बगैंचा भाँडा र उनीहरूको सामग्री - कुनचाहिँ सब भन्दा राम्रो हो?
बगैंचा को व्यवस्था धेरै सावधानी संग गरिनु पर्छ। जहाँसम्म, जब प्रयोगकर्तासँग उसको अगाडि ठूलो बगैचा छैन, तर केवल एउटा सानो बगैचा, वा बालकनी वा टेरेस पनि, यसले हरियो ठाउँको एक टुक्रा सिर्जना गर्न सक्दछ। यसको आधार तब हुनेछ बगैंचा भाँडाजसको छनौट ठूलो छ।
हेर्नुहोस् अनलाइन उत्पादन सूची >> वा क्याटलग डाउनलोड गर्नुहोस् >>
बगैचाको लागि कुन भाँडा छनौट गर्न, तिनीहरूको सामग्री वा आकारलाई ध्यानमा राख्दै?
यो पनि हेर्नुहोस्: सानो शहरी वास्तुकला
बगैचा भाँडा को प्रकारहरु
बगैचा भाँडा विकल्पहरूको एक धेरै विस्तृत श्रृंखला मा उपलब्ध छन्। तिनीहरू आकार, आकार र सामग्रीमा फरक छन्, त्यसैले यो सबै अन्तरिक्ष व्यवस्थाको विचारमा निर्भर गर्दछ। यदि भाँडालाई तिनीहरूको सामग्री अनुसार विभाजित गरिएको छ भने, निम्न कुरालाई ध्यानमा राखिन्छ:
काठको बगैंचा भाँडा
काठको बगैंचा भाँडा - जस्तो प्रसिद्ध छ, काठ एक प्राकृतिक सामग्री हो, जुन काठको बगैंचा भाँडो कुनै बगैचा वा टेरेसमा कुनै अपवाद बिना फिट हुनेछ धन्यवाद। सबै पछि, यो पनि एक रमाईलो स्टाइलिंग र बहुमुखी प्रतिभा हो। यसैले काठको बगैंचाका भाँडाहरूले काठ, रट्टन वा टेक्नो-रट्टन बेंचहरू र आर्मचेयरहरू भरिपूर्ण ठाउँ भर्नेछ, साथै कम क्लासिक स्थानमा फिट हुनेछ।
METALCO वास्तविकताको उदाहरणहरू हेर्नुहोस्
ठोस बगैंचा भाँडा
ठोस बगैंचा भाँडा - ठोस बगैंचा भाँडा प्राय: सार्वजनिक ठाउँहरूमा प्रयोग गरिन्छ। यद्यपि तिनीहरूलाई घर बगैंचा, बालकनी र छानामा पनि राख्न सकिन्छ। महत्त्वपूर्ण रूपमा, प्रयोगको दृष्टिकोणबाट, क concrete्क्रीट बगैंचामा भाँडाहरू गह्रौं हुन्छन्, यसैले एकातिर हावाको आँधी प्रतिरोधी र अर्कोतर्फ हिंड्न गाह्रो छ। यदि यि सानो ठाउँहरू छन् भने, ती पनि आफ्नो उपस्थिति संग अभिभूत गर्न सक्छन्। त्यसोभए ठोस बगैंचामा भाँडाहरूमा सुव्यवस्थित आकारहरू, वा भाँडामा मात्र नक्कल गरिएको क concrete्क्रीटमा लगानी गर्न लायकको हुन्छ।
प्लास्टिक बगैचा भाँडा
प्लास्टिक बगैचा भाँडा - भाँडा को यस प्रकार को मुख्य रूप मा एक कम मूल्य को विशेषता हो। थप रूपमा, यो उत्पादनहरूको विशाल दायरा हो (ठूला र साना प्लास्टिक बगैंचा भाँडाहरू, कम र उच्च बगैंचा भाँडा, आधुनिक र क्लासिक बगैंचा भाँडा सहित)। प्राय: तिनीहरू हलुका छन् र बोक्न सजिलो छ। अर्कोतर्फ, तिनीहरू सजीलो हावाको गुस्सा द्वारा दस्तक हुन्छन्, त्यसैले - विशेष गरी ठूला प्लास्टिकका भाँडाहरू - यो अतिरिक्त वजन थप्न लायकको छ। प्लास्टिकको भाँडोको फेदमा प्वाल पनि उपयोगी हुन्छ, जसले यसमा रोपेको बिरूवाको उचित हाइड्रेसन सुनिश्चित गर्दछ।
सिरेमिक बगैंचा भाँडा
सिरेमिक बगैंचा भाँडा - निस्सन्देह, सिरेमिक बगैंचा भाँडा (ठूलो र सानो) प्राय: जसो प्रयोग हुने भाँडाहरू मध्ये एक हुन्, किनकि ती रमाईलो प्रकारको प्रबन्ध हुन्। तिनीहरू सार्न सजिलो छन् र थप रूपमा तिनीहरू मौसम अवस्था प्रतिरोधी छन्। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, बिरूवाहरूको हेरचाहको मामलामा, उनीहरूले उचित हावा परिसंचरण सुनिश्चित गर्छन्। दुर्भाग्यवश, सिरेमिक बगैंचा भाँडा धेरै टिकाउ र सजिलै भाँच्न सक्दैनन्, उदाहरणका लागि जब चाल वा बोक्दा।
ढुone्गा बगैचा भाँडा
ढुone्गा बगैचा भाँडा - अत्यन्त रमणीय र अनन्य, तर एकै साथ बगैचाको लागि महँगो भाँडा, जुन प्राय: सार्वजनिक स्थानहरूमा प्रयोग गरिन्छ (उदाहरणका लागि कब्रिस्तानमा)। ढु stone्गाको भाँडाहरूका लागि सामग्री ग्रेनाइट वा मार्बल हुन सक्छ।
धातु बगैचा भाँडा
धातु बगैचा भाँडा - धातुको भाँडा प्राय: तुलनात्मक रूपमा साना उत्पादनहरू हुन्छन्, प्रायः एल्युमिनियम वा गेल्भनाइज्ड इस्पातको प्रयोग गरेर, जसले उनीहरूलाई क्षयबाट बचाउँछ। थप रूपमा, तिनीहरू शीत प्रतिरोधी बगैंचाका भाँडा हुन् जुन बर्षभर बाहिर छोड्न सकिन्छ। तिनीहरूलाई आधुनिक बगैंचा भाँडाका रूपमा व्यवहार गर्नुपर्दछ।
टेक्नोराटान वा रट्टन भाँडाहरू
टेक्नोराटान वा रट्टन भाँडाहरू - आधुनिक शैलीमा बगैंचा, बालकनीहरू, टेरेसहरू र गजेबोस स्टाइल गर्नको लागि उत्कृष्ट फूलको भाँडा। तिनीहरू आकार र आकारका सर्तमा एक विशाल चयन प्रस्ताव गर्दछन्, जुन बिभिन्न सामग्रीको दायाँ भाँडोको लागि आवरणको रूपमा काम गर्न सक्दछ। रत्तन र पाली रट्टन बीचको भिन्नता, अन्य चीजहरूको बीचमा, ओस र सूर्य किरणहरूको प्रतिरोध हो। होईन, पाली रट्टन यस सम्बन्धमा राम्रो देखिन्छ।
पनि हेर्नुहोस्: पार्क, शहर र बगैचा बेन्चहरू
वा सायद सजावटी शहर भाँडाहरू?
बगैंचाको लागि भाँडाको विकल्प ठूलो छ, विशेष गरी जब केही बगैंचामा तपाईं शर्त बनाउन सक्नुहुन्छ मूल, एक प्रकारको शहर भाँडा। यस अवस्थामा यी ठूला वा कम्तिमा मध्यम आयामका भाँडा हुन्, त्यसैले तिनीहरू ठूला ठाउँहरूमा राम्ररी काम गर्नेछन्, जे होस् यो नियम होईन। सही रूपमा चयन गरिएको शहरको फूल भाँडा निश्चित रूपमा बगैचा सुन्दर र यसमा रंग थप्न हुनेछ।
एक नियमको रूपमा, यो एक परम्परागत, न्यूनतम रूप हो, धन्यवाद जुन यो बगैंचाको व्यवस्थामा विशेष गरी आधुनिक शैलीमा फिट हुनेछ। के अधिक हो, एकातिर, ती सजावटको भाँडा हुन्, अर्कोतर्फ, तिनीहरू अतिरिक्त कार्यहरूसँग व्यावहारिक छन्:
यस तरीकाले, तिनीहरू व्यावहारिक प्रकार्यको साथ सौंदर्यशास्त्र संयोजन गर्दछन्। भाँडोले फूलहरू, झुडुहरू वा लघु रूखहरूको लागि ठाउँ, साथै टेबल, सिट, वा साँझ पछि यसले बगैंचामा सञ्चार मार्गहरू चिन्ह लगाउँदछ।
यो पनि हेर्नुहोस्: शहरी वास्तुकलाको एक तत्वको रूपमा आधुनिक सडक कूडाहरूको डिब्बा
कुन बगैचा भाँडा छान्ने?
त्यसोभए यो स्पष्ट देखिन्छ कि बजारमा बगैंचाको भाँडोको एक धेरै ठूलो चयन छ, त्यसैले प्रत्येकले आफ्नो बगैंचा, बालकनी वा टेरेसको लागि ठीक केहि खोज्नु पर्छ। यो सबै अन्तरिक्षको प्रबन्धमा निर्भर गर्दछ, उदाहरणका लागि परम्परागत, आधुनिक वा अवन्त-गार्डे शैलीमा। केहीले काठको भाँडो छनौट गर्नेछन्, अरूले धातु वा ढु stone्गाको भाँडाहरू रोज्नेछन्। साना भाँडाहरू बालकनीको लागि सिफारिस गरिन्छ, तर ठूला बगैंचा भाँडा ठूलो टेरेसका लागि उपयुक्त हुन्छ। त्यो पनि नोट गर्नुहोस् प्रत्येक भाँडालाई स्वतन्त्र रूपमा सजावट गर्न सकिन्छ, उदाहरणका लागि अधिक र अधिक सामान्य हस्तशिल्पहरू, क्यासि।, र पेंट पनि।
धेरैका लागि मूल्य निश्चित रूपमा चयन मापदण्ड पनि हो। यसको मतलब यो होइन, तपाईले सस्तो बगैंचा भाँडामा शर्त लगाउनु पर्छ। बिक्री (उदाहरणका लागि शहर फार्म डिजाइन) आकर्षक मूल्यहरूमा उच्च-गुणस्तरको सामग्रीले बनेको भाँडा किन्ने राम्रो अवसर हो। यस तरिकाले तपाईले धेरै बचत गर्न सक्नुहुन्छ, सस्तो खरीद गरेर बगैंचा भाँडा कंक्रीट को बनेको, र पनि विशिष्ट ढु stone्गाको भाँडो।
अर्को चयन मापदण्ड ती बिरुवाहरू हुन् जुन प्रयोगकर्ताले आफ्नो बगैंचा, टेरेस वा बालकनीको हरियो ठाउँमा रोप्न चाहन्छ। तिनीहरू जहिले पनि ठूलो बगैंचामा भाँडो हुँदैन। सानो, झुन्डो भाँडामा चढाई बिरूवा र rhizomes को साथ राम्रो काम गर्दछ। ठूलोमा पनि झाडी र बौने रूखहरू बढ्न सकिन्छर सबै प्रकारको भित्ता भाँडाहरूमा जडिबुटी.
यो पनि हेर्नुहोस्: फेंस पोष्टहरू
ठोस बगैंचा भाँडाठोस बगैंचा भाँडाकाठको बगैंचा भाँडाशहर भाँडानिर्माता शहर भाँडाबगैंचा भाँडाठोस बगैंचा भाँडासिरेमिक बगैंचा भाँडाठूलो सिरेमिक बगैंचा भाँडाकाठको बगैंचा भाँडाठूलो बगैंचा भाँडाढु stone्गा बगैचा भाँडाहरूधातु बगैचा भाँडाशीत प्रतिरोधी बगैंचा भाँडाहरूआधुनिक बगैंचा भाँडाप्लास्टिक बगैचा भाँडाठुलो प्लास्टिक बगैंचा भाँडाहरूबगैंचा भाँडा बिक्रीठोस बगैंचा भाँडारट्टनको भाँडाटेक्नोराट्टन भाँडाकाठको बगैंचा भाँडाठूलो बगैंचा भाँडाविशेष फूल भाँडाआधुनिक बगैंचा भाँडाअग्लो बगैचा भाँडाहरू
मेटलको खेल मैदान
एक आधुनिक खेल मैदानले ताजा हावामा प्रतिबन्धित र सुरक्षित मजाका लागि सबै उमेरका बच्चाहरूलाई मात्र होइन, तर युवाहरूका लागि पनि अनुमति दिन्छ। ...
हाल, सडक फर्नीचरले रूख कभरहरू पनि समावेश गर्दछ। यी कार्यात्मक र सौंदर्य तत्वहरू विभिन्न सामग्रीमा बनाउन सकिन्छ। ...
सुक्खा कुहिरो विधि प्रयोग गरेर कोठाहरूको कीटाणुशोधनको लागि प्रणाली मिस्टि।
सुक्खा कुहिन कीटाणुशोधन प्रक्रियामा प्रयोग गरिएको मिस्टि systems प्रणालीहरू विभिन्न स्थानहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। अहिले त्यो ...
अफरमा नयाँ! कीटाणुशोधन स्टेशनहरू - METALCO बाट हातहरूको लागि hygienic
कीटाणुशोधन स्टेशनहरु / हात स्वच्छता स्टेशनहरु सानो वास्तुकला को एक तत्व को रूप मा हाम्रो प्रस्ताव मा एक नवीनता हो। यो एक समाधान हो जुन सरलीकृत गर्दछ ...
15 अप्रिल 2020
सानो वास्तुकला शहर वास्तुकलामा एकीकृत साना वास्तु वस्तुहरू द्वारा सिर्जना गरिएको छ वा निजी सम्पत्तीमा राखिएको छ ...
पोल्याण्ड को गणतन्त्र को वास्तुशास्त्र च्याम्बर
यो सत्य हो कि आर्किटेक्टको पेशा एक निःशुल्क पेशा हो जसले धेरै सन्तुष्टि र भौतिक लाभ लिन सक्दछ, तर कार्य गर्न सुरु गर्ने तरिका ...
हामीलाई कल दिनुहोस्
एउटा इ-मेल लेख्नुहोस्
© २०२० सिटी फारम डिजाइन |गोपनीयता नीति
तपाईंको व्यक्तिगत डाटा तपाईंको अर्डर प्रक्रिया गर्न, हाम्रो वेबसाइटमा तपाईंको भ्रमण ह्यान्डल गर्न र हाम्रोमा बताईएको अनुसार अन्य उद्देश्यहरूको लागि प्रयोग हुनेछ गोपनीयता नीति .
मैले वेबसाइट नियमहरू पढेको छु र स्वीकार गर्दछु